The Motorola One Action na-ere na Spain | Gam akporosis
Motorola One Action bụ ekwentị nke atọ nke ika iji jiri gam akporo Otu, osụk a izu ole na ole gara aga. Ekwentị dị iche iche a na-enye nti utịp maka ụlọ ọrụ, ya mere ha nwere atụmatụ ịmepụta ụdị ọhụrụ n'ime ya. Ihe omuma ohuru a, nke abuo hapuru anyi n’aho a bu nke emeputara ugbua na Spain.
Anyị na-eche ihu na ekwentị nke na-apụ maka igwefoto azụ ya, n'etiti anyị zutere igwefoto emereme. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ na Motorola One Action a na-enye ihe dị iche na ahịa. O doro anya na ọ bụ ihe na - eme ka ọ bụrụ nhọrọ nke nnukwu mmasị nye ọtụtụ ndị ọrụ.
Enwere ike ịzụta ekwentị na Spain ugbu a. A malitelarị ya na ụlọ ahịa, ma n'ịntanetị ma n'ụlọ ahịa anụ ahụ. Anyị ga-enwe ike ịzụta Motorola One Action na ụlọ ahịa dịka Amazon, MediaMarkt, FNAC ma ọ bụ El Corte Inglés n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. You gaghị enwe nsogbu ma a bịa n'ịchọta etiti a na ụlọ ahịa.
Ejiri ngwaọrụ abụọ rụọ ọrụ ahụ, nke anyị hụburu na ngosi ya, nke bụ acha anụnụ anụnụ na isi awọ. Ọ na-abatakwa otu ụdị nke usoro RAM na nchekwa, nke bụ 4/128 GB. Ya mere, anyị enweghị nhọrọ ọzọ ịhọrọ site na nke a.
Ọnụahịa Motorola One Action na Spain bụ euro 279. Ọ na-anọgide dị mma ọnụahịa n'etiti etiti na gam akporo, na mgbakwunye na ịnwe ọnụ ala karịa ihe onye ọhụụ nwere, nke a na-ere na Spain maka ọnwa ole na ole. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe a tụrụ anya na ọ ga-eme.
Ya mere, ndị ọrụ ahụ bụ nwere mmasị ịzụrụ Motorola One Action, ha nwere ike ime ya ugbu a na ọkwa. Ebuola ụdị akara a na Spain ma dị ugbu a. Ekwentị ị nwere ike ịmasị ọtụtụ, n'ihi ọnụnọ nke igwefoto ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Emebere Motorola One Action na Spain
Redmi na-eweputa onyonyo izizi ya nke ọma